Na izany aza dia mety ho tonga amin' ny fanahy voadio tan­teraka ny hihaino an' i Satana, hifandahatra amin' i Satana man­dra-pahalavony amin' ny fakampanahy sy ny ota ; Satana dia na­mitaka an' i Eva, izay nanana fo madio tanteraka, na dia izany aza dia tsy azo itompoana fa hahomby izy tahaka ny talohan' ny naha­diovan' ny fo ho afaka amin' ny ota rehetra ! satria tsy misy mpa­madika ao anatiny, izay hamoha ny vavahadin' ny rova ho amin' ny fahavalo ety ivelany.
Ny fahamasinana tsy manome fiarovana na iza na iza hoe tsy afaka ny hanota izy, fa manome ny olona ny fitaovan' ny hery rehetra kosa izy mbamin' ny fijoroana hanohitra ny fakampanahy.
Na dia maharitra sy masiaka aza ny ady, dia hentitra sy feno ny fandresena, amin' ny alalan' ny fitomoerana ao amin' i Kristy ! Fa toy ny oram-baratra sy ny rivotra izay manampy man­dentika ny fakan-kazo, ireo hazofijaliantsika sy zava-manahirana ary fitsapana no mpanampy tsara indrindra ho antsika hitom­boana amin' ny fahasoavana sy ny fahalalana an' i Jesosy Kristy Tompontsika ! Jesosy dia tsy nampanantena na oviana na oviana, làlana mankamin' ny voninahitra, tsy misy zava-tsarotra sy hazofi­jaliana mbamin' ny fanoherana avy amin' i Satana... Fa hoy ny fampanantenan' i Jesosy : 'Indro, Izaho momba anareo man­drakariva ambara-pahatongan' ny fahataperan' izao tontolo izao !’. Ary hanampy anao Izy hiady handroaka ny devoly ka hivoaka ma­noatra noho ny mpandresy isika amin' ny alalan' Ilay tia antsika !